Security Surveillance Radar Factory - တရုတ်လုံခြုံရေးစောင့်ကြည့်ရေဒါထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
XW / SR216 လုံခြုံရေးစောင့်ကြည့်ရေဒါ
1. ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အသုံးပြုမှု XW / SR216 လုံခြုံရေးစောင့်ကြည့်ရေဒါသည်ရေဒါခင်းကျင်းမှုနှင့်စွမ်းအားဖြန့်ဖြူးရေးထိန်းချုပ်မှုသေတ္တာများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်းကိုနယ်စပ်၊ လေဆိပ်နှင့်စစ်တပ်စသည့်အဓိကနေရာများရှိလမ်းလျှောက်သူ၊ မော်တော်ယာဉ်များသို့မဟုတ်သင်္ဘောများကိုရှာဖွေရန်၊ သတိပေးရန်နှင့်ပစ်မှတ်ညွှန်ပြရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။ ယင်းသည်ပစ်မှတ်လမ်းကြောင်းအကြောင်း၊ တိကျသောသတင်းအချက်အလက်များဖြစ်သည့် bearing, distance နှင့် speed ။ 2. အဓိကအသေးစိတ်အချက်များ Item Performance parameters လုပ်ငန်းစနစ် Phased array system (azimuth phase scan) လည်ပတ်မှု ...
XW / SR215 လုံခြုံရေးစောင့်ကြည့်ရေဒါ
1. ထုတ်ကုန်များအသုံးပြုခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်း XW / SR215 ရေဒါကိုအဓိကအားဖြင့် 1 ရေဒါခင်းကျင်းခြင်းနှင့် 1 power distribution control box တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်းကိုနယ်စပ်၊ လေဆိပ်နှင့်စစ်တပ်စသည့်အဓိကနေရာများရှိလမ်းလျှောက်သူ၊ မော်တော်ယာဉ်များသို့မဟုတ်သင်္ဘောများကိုရှာဖွေရန်၊ သတိပေးရန်နှင့်ပစ်မှတ်ညွှန်ပြရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။ Track ၏အချက်အလက်၊ ပစ်မှတ်၏တည်နေရာ၊ ၂။ အဓိကသတ်မှတ်ချက်များ ITEM Performance parameters လုပ်ငန်းစနစ် Phased array system (azimuth phase scan) လည်ပတ်မှုစနစ် Pu ...
XW / RB101 လုံခြုံရေးစောင့်ကြည့်ရေဒါ
1. ထုတ်ကုန်လုပ်ဆောင်မှုနှင့်အသုံးပြုရန် XW / RB101 လုံခြုံရေးစောင့်ကြည့်ရေဒါသည်အဓိကအားဖြင့်ရေဒါခင်းကျင်းမှုနှင့်ပါဝါ adapter တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်းကိုနယ်စပ်၊ လေဆိပ်နှင့်စစ်တပ်စသည့်အဓိကနေရာများရှိလမ်းလျှောက်သူနှင့်မော်တော်ယာဉ်များကိုရှာဖွေရန်၊ သတိပေးရန်နှင့်ပစ်မှတ်ညွှန်ပြရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ပစ်မှတ်၏တည်နေရာ၊ အကွာအဝေးနှင့်မြန်နှုန်းစသည့်အချက်အလက်များကိုတိကျစွာပေးနိုင်သည်။ ၂။ အဓိကသတ်မှတ်ချက်များ ITEM Performance parameters လုပ်ငန်းစနစ် Phased array system (azimuth phase scan) လည်ပတ်မှုစနစ် Pulse ...